Iziseko zeeMpawu zeBar ze-iPhone
Ibha yomgangatho isebenza ngapha phezulu kwe-iPhone yakho nokuba yeyiphi na imbonakalo okanye imbonakalo yomhlaba, kwiiapps ezixhasa ukujongwa komhlaba. Iimpawu zayo zikunika ulwazi malunga neselfowuni kunye / okanye uqhagamshelo lwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo, ubomi bebhetri, kunye nemisebenzi yokuncedisa ekusenokwenzeka ukuba uyivulile, enje ngethi Ungaphazamisi kunye newotshi yealam.
Nantsi ingcaciso nganye nganye. Khumbula, ngekhe ubabone bonke ngaxeshanye kwi-iPhone yakho, kwaye ezinye awunakuze uzibone:
Imo yenqwelo moya: Uyabona le icon ukuba uvule imowudi yenqwelomoya kwiiSetingi.
Isivusi: Ivela ukuba useta ialam xa usebenzisa i Clock app.
Ibhetri: Ibonisa ukuba igcwele kangakanani ibhetri. Kuluhlaza ukuba ibhetri iphakathi kwe-100 kunye ne-20 yepesenti ehlawulisiweyo. Utshintsha ubomvu kwaye ubonise isahlulo esincinci ngasekhohlo xa kuhlala ngaphantsi kweepesenti ezingama-20. Inombane ecaleni kwayo xa ibhetri ihlawuliswa.
Ibluetooth: Ibonisa ukuba iBluetooth ivuliwe. Xa iblowu okanye imhlophe, uqhagamshelene nesinye isixhobo seBluetooth esifana nentloko yentloko. Xa ingwevu, iBluetooth ivuliwe kodwa akukho sixhobo sixhunyiwe. Unokumangaliswa kukwazi ukuba iBluetooth ibizwa ngegama lokumkani waseDenmark.
Ukuhambisa umnxeba: Kwiimodeli ze-GSM, kubonakala xa ugqithisile iifowuni zakho kwenye inombolo yefowuni.
Uphawu lweSeli: Ibonisa ukomelela kwesiginali yeselfowuni i-iPhone yakho eqhagamshelwe kuyo. Ukuba awuzalisanga izangqa okanye enye, isiginali ayibuthathaka - isangqa esiqinileyo, uphawu olomeleleyo. Akukho Nkonzo ivela xa i-iPhone ingakwazi ukukhetha umqondiso kumboneleli wakho weselula. Ukuba imowudi yenqwelo moya ivuliwe, ubona i icon yenqwelo moya endaweni yesangqa sesignali yeseli.
Sukuphazamisa: Kukhumbuza ukuba usebenze into ethi Ungaphazamisi.
Umda (E): Ivela xa i-iPhone iqhagamshelwe kumnatha wedatha ye-EDGE yenethiwekhi yedatha yokufikelela kwi-Intanethi. Iimodeli ze-GSM zixhasa amanethiwekhi e-EDGE.
ungaxuba i-tylenol kunye ne-benadryl
I-GPRS / 1xRTT: Iimodeli ze-GSM zisebenzisa uthungelwano lwe-GPRS (General Packet Radio Service) kunye neemodeli ze-CDMA zisebenzisa inethiwekhi ye-1xRTT (1x Radio Transmission Technology) ukufikelela kwi-Intanethi xa ezi nethiwekhi zikhona.
Iinkonzo Zendawo: Xa ubona le icon, iapp, ezinje ngeMaphu okanye iZikhumbuzo, zilanda umkhondo wendawo yakho yangoku ukuze ikunike ulwazi olukufuphi okanye ezinye iinkonzo.
I-LTE: Yazisa ukuba unxibelelwano lweselula lwe-LTE; le icon inokuba yi-4G, kuxhomekeke kumphathi wakho.
Umsebenzi weNethiwekhi: Ijikeleza xa i-iPhone ingena kwiselula okanye inethiwekhi ye-Wi-Fi kuyo nayiphi na usetyenziso olusebenzisa i-Intanethi, njengeSafari okanye iVenkile ye App. Ikwabonakala xa i-iPhone ingqamanisa ulwazi lwe-iCloud ngaphezulu komoya, okanye ngamanye amaxesha xa usetyenziso lusenza eminye imisebenzi enxulumene nedatha.
Indawo eHotpot: Le icon iyasebenza xa uqhagamshele kwenye i-iPhone okanye i-3G / 4G i-iPad ebonelela ngeHotspot yobuqu.
Isitshixo sokuziqhelanisa: Oku kukukhumbuza ukuba ucime imbonakalo yokujonga umhlaba. Ungayiguqula i-iPhone yakho ngayo yonke indlela, kodwa isikrini sihlala sikwi-portrait-ngaphandle kokuba uvula usetyenziso olusebenza kuphela kwindawo yokuma komhlaba, njengemidlalo ethile okanye iividiyo.
Ukuvumelanisa: Ibonisa ukuba i-iPhone yakho iyavumelanisa ne-iTunes okanye i-iCloud.
TTY: Ibonisa ukuba i-iPhone yakho iqwalaselwe ukuba isebenze ngomatshini weTeletype (TTY).
UMTS / EV-DO (3G): Ibonisa ukuba iimodeli ze-GSM ziqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-UMTS (ye-Universal Mobile Telecommunications System) yenethiwekhi, okanye iimodeli ze-CDMA ziqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-EV-DO (Evolution-Data Optimised) yenethiwekhi ukufikelela kwi-Intanethi xa ezo nethiwekhi zikhona.
IVPN: Ibonisa ukuba i-iPhone iqhagamshelwe kwiVPN (iNethwekhi yangasese yangasese).
IWi-Fi: Ibonisa i-iPhone ukuba ixhunyiwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi. Imivalo engaphezulu, ukudibana, ukuzinza ngakumbi-unxibelelwano.
iziphumo ebezingalindelekanga zepramipexole
ungahamba ngesinqe esaphukileyo
I-vitamin engaphambi kokubeleka ene-stool softener
Ukuphambuka okumiselweyo kwi-84